Soosaarayaasha Shiinaha iyo Alaab-shiide | Yidong
Sawir gacmeedka Graphite
Sawir gacmeed jajab ah, iskutallaab ka sameysan walxaha garaafka. Aadamuhu wuxuu leeyahay taariikh dheer oo ah adeegsiga garaafyada garaafyada. Dadkii ugu horreeyay waxay isticmaaleen garaaf dabiici ah (garaaf garaf leh iyo garaaf dhuleed) iyo dhoobada, dhagaxa ama ciida si ay isugu dhex galaan meelaha banaan, iyo geedi socodka waxsoosaarka dhoobada ayaa loo adeegsaday sameynta jaantusyada garaafka ee dhalaalida biraha (naxaasta, Birta, birta, iwm). Xirmooyinka garaafku wuxuu leeyahay awood farsamo oo sarreeya, qaboojin, kuleylka kuleylka, wuxuu u adkeysan karaa dhalaalida badan wuxuuna iska caabin karaa nabaad-guurka xalka heerkulka sare. Qalabka loo yaqaan 'Graphite crucible' wuxuu dhalaali karaa birta birta ah, birta la shubay, daawaha naxaasta ah, zinc alloy, alxanka naxaasta, iwm. qalab ayaa la xaddiday. Si kastaba ha noqotee, warshado badan oo yaryar oo warshadeeyayaal ah ayaa sii wadaya isticmaalka noocan ah garaafyada la shiidayo.
Tan iyo markii uu soo ifbaxay garaafka macmalka ah dhamaadkii qarnigii 19-aad, dadku waxay ku farsameeyeen garaafka macmalka ah shaashadda garaafyada. Horumarinta iyo soosaarida nadiifinta sare ee qaabdhismeedka garaafka, garaafka xoogga sare, kaarboonka dhalada ah, iwm., Iskutallaabyada garaafyada ee laga sameeyay agabkan waxay ballaarinayaan kala duwanaanta dalabyada iskudhafyada garaafyada. sifaynta macdanta qaaliga ah sida dahabka iyo qalinka. , Atomiga tamarta uumiyamka dhalaalaya, semiconductor wax silicon hal kristal, germanium hal madal oo keli ah, laguna dabaqay falanqaynta kiimikada kala duwan.
Qalabka loo yaqaan 'Graphite crucibles' waxaa loo kala qaadaa noocyo dabiici ah oo loo yaqaan "graphite crucibles", iskutallaabno garaaf ah oo uu sameeyay nin, saboolnimo garaafyo sare leh, iskutallaabno kaarboon ah oo qiireysan, iwm. Ujeedada, waxaa jira silsilado bir ah, iskutallaabyo naxaas ah, goolal dahab ah, iyo iskutallaabyo falanqeyn ah.
Heerka tiknoolajiyada wax soo saarka ee iskutallaabyada garaafka gudaha ayaa gaaray ama xitaa ka sarreeyay iskutallaabyada dibedda laga keenay Noocyo tayo sare leh oo iskutallaab ah oo graphite ah ayaa leh sifooyinka soo socda:
1. Cufnaanta sare ee iskutallaabyada graphite waxay ka dhigeysaa iskutallaabtu inay yeeshaan kuleylka kuleylka ugu fiican, iyo kuleylka kuleylka ayaa si weyn uga fiican kan ulaha kale ee dibedda laga keeno. ; Sawir gacmeed jaantus ah
2. Garaafka garaafku waxa uu leeyahay lakab glaze ah oo gaar ah iyo walxo cufan oo wax taaj oo kale ah, taas oo si weyn u wanaajinaysa caabbinta daxalka ee badeecada oo ay sii dheereynayso adeeggeeda.
3. Qaybaha garaafka ee ku jira garaafka iskutallaabtu waa dhammaantood garaaf dabiici ah oo leh kuleyl kuleyl aad u wanaagsan. Ka dib marka la kululeeyo garaafka garaafka, waa in aan lagu dhejin miis bir ah oo qabow isla markaaba si looga hortago inuu dillaaco sababo qabow degdeg ah.
1. Tirada qeexitaanka sheyga waa awooda naxaasta (kg)
2. Garaafka garaafka waa in lagu hayaa meel qalalan ama sariir alwaax ah markii la keydiyo.
3. Si taxaddar leh wax ugu qabso marka aad safreyso, waana mamnuuc in la iska tuuro oo la ruxruxo.
4. Kahor isticmaalka, waxay u baahan tahay in lagu dubo qalabka qalajinta ama foornada, heerkulkuna si tartiib tartiib ah ayuu u kordhaa ilaa 500 ° C.
5. Weelka waa in la hoos dhigaa dusha afka foornada si looga ilaaliyo daboolka foornada inuu xirto afka kore ee mashiinka.
6. Ku darida qalabka waa in lagu saleeyaa qaddarka dhalaalka ah ee dhalada. Ha ku darin waxyaabo aad u badan hana ka ilaalin in waxa la jajabiyey la cadaadiyo.
7. Foornada iyo iskuxidhka isku haynta waa inay u ekaadaan qaabka dhalada. Qaybta dhexe ee haysa waa inay ka hortagtaa in wiishka lagu burburiyo xoog.
8. Markaad ka soo bixinaysid xoqida la shubay iyo kookaha gidaarka gudaha iyo dibedda ee dhajiska, ku garaac si aad uga hortagto waxyeelada soo gaadhaysa.
9. Masaafada ku habboon waa in la dhigaa inta udhaxeysa dhagxaanta iyo darbiga foornada, oo wiishka waa in la dhigaa bartamaha foornada.
10. Adeegsiga habboon ee aaladaha gubidda iyo waxyaalaha lagu daro waxay yareynayaan nolosha adeegga sheyga.
11. Inta lagu gudajiro isticmaalka, rogida wiishka asbuucii halmar waxay dheereyn kartaa nolosha adeega sheyga.
12. Ka-hortag ololka wax gubaya ee xoogga leh inuu si toos ah u buufinayo dhinac iyo geedka hoose ee mashiinka la shiidayo.
Hore: Qaybo qaabeed garaaf leh
Xiga: Korontada UHP Graphite
Qiimaha Naqshadeynta Graphite
Qiyaasaha Masawirka Garaafka
Alaab-qeybiyeyaasha Naqshadeynta Garaafka
Naqshadaynta Macdanta 'Graphite'
Mashiinka Mashiinka loo yaqaan 'Graphite Melting Crucible'